Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Patrick Bamford Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị nke Patrick Bamford na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Enyi nwanyị, Nwunye ka ọ bụrụ, Net Worth, Web and Life Life.
Na a nutshell, anyị nyochaa akụkọ ihe mere eme nke Marcelo Bielsa n'ike mmụọ nsọ Professionalmụaka ndị egwuregwu bọọlụ England. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke Patrick Bamford's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya.
Ee, onye ọ bụla maara nke a Leeds Forward na ụlọ ọgbakọ ya na-egosi na ndị nwere obi abụọ adịghị mma. Yana Jack Harrison, a gọziri ya na usoro, nkà na ikike na bọl.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-anụ egwuregwu bọọlụ maara maka mmalite ya. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido na nwata.
Patrick Bamford Storymụaka Akụkọ:
Maka Biography Starters, aha ya bụ “Pat.” A mụrụ Patrick James Bamford na 5th ụbọchị Septemba 1993 na ndị mụrụ ya, Mr na Mrs Russell Bamford na ahịa / obodo mepere emepe nke Grantham, England.
Ọ bụ nwa nwoke mbụ n'ime ụmụ atọ (gụnyere ụmụ nwanyị abụọ) amụrụ site na njikọ dị n'etiti mama ya na papa ya.
Patrick Bamford Afọ na-eto eto:
Nwa okorobịa "Pat" tolitere na obere obodo Norwell, na Nottinghamshire na ụmụnne nwanyị abụọ Ciara na Orla.
Mgbe ọ bụ nwata, ọ bụ onye na-akwado Nottingham FC ma jiri oge dị ukwuu mụọ ịkụ egwu egwu.
Lelee otu n'ime foto nwata mara ama nke Bamford n'akụkụ nwanne ya nwanyị nke obere bụ Ciara.
Patrick Bamford Ezigbo Ezinụlọ:
Nke mbụ, ọ bụ otu n'ime ndị si n'ezinụlọ bara ọgaranya. Ndị nne na nna Patrick Bamford bụ ụmụ amaala nọ n'ọkwa klaasị hụ na ọ gụrụ akwụkwọ nkeonwe ma nwee ike ịkpọ violin na ọkwa 7.
Lee, obere ogbugba nke Patrick Bamford ya na ezi na ụlọ ya.
Anyị niile maara n’iru bụ mba bekee. Agbanyeghị, ihe ị nwere ike amaghị bụ n'eziokwu na nne na nna Patrick Bamford abụghị ndị Bekee.
Nsonaazụ nke nyocha iji chọpụta agbụrụ ya na-ekpughe na o nwere agbụrụ Irish sitere na ezinụlọ nne ya.
Patrick Bamford Football Akụkọ:
N'ụzọ na-akpali mmasị, nwoke Bekee ahụ malitere ịgba bọl mgbe ọ dị obere. Ọ bụ naanị 8 afọ mgbe ọ ghọrọ akụkụ nke usoro ntorobịa Nottingham Forest.
Ndị nne na nna Patrick Bamford dị njikere ịkwado ya ma chọọ naanị otu ihe - agbanwe agbanwe.
“Papa m na mama m na-ahọrọ ihe ha ga-ekwe ka m mee.
Ha siri ọnwụ n'eziokwu ahụ bụ na m ga-amalite naanị ihe m nwere ike ịmecha nke ọma ”
Kwuru n'ihu na Daily Mail. Dika edere ya, nne na nna ya ekweghi ka o gbaa bọọlụ kamakwa ka ọ bụrụ mascot maka nwata ya. You nwere ike iji anya nke uche hụ ya?
N'iburu n'uche ihe nne na nna ya tụrụ anya ya, ihe egwuregwu bọọlụ gbagoro site na ọkwa Nottingham Forest wee mee ndị otu egwuregwu izizi ya na 2011.
N'oge na-adịghị anya tupu ya abanye na Chelsea na 2012- oge ọ malitere ile anya ọdịnihu na-akpali akpali na blues.
Patrick Bamford Biography - Difzọ siri Ike Tobụ Onye Akụkọ:
N'ụzọ dị mwute, Chelsea atụleghị onyinye bọọlụ dị njikere maka bọọlụ Premier League. N'ihi ya, Bamford chọtara onwe ya na Chelsea Loan Farm.
Ọ baghị uru ịkọwara gị nkọwa zuru oke, ọhụụ tachiri obi n'ihe mgbazinye ego asaa na oge isii.
Clubslọ klọb atọ mbụ nke Bamford nwere ọrụ ịgba egwu ya gụnyere Milton Keynes, Dons, Derby County na Middlesbrough ebe o meriri n'egwuregwu Championship nke afọ ahụ.
Patrick Bamford Biography - Akụkọ Successga nke Ọma:
Mgbazinye ego ndị egwu ahụ gara Crystal Palace, Norwich City na Burnley enweghị ihe ha ga-ede n'ụlọ. N'agbanyeghị nke ahụ, nlọghachi ya na Middlesbrough (na-enweghị ego mbufe) bụ mmalite nke ịrị elu ya.
You mara na ọ bụ na klọb ka Bamford nwetara goolu mbụ ya na Premier League? O nyekwaara ọgbakọ ahụ aka Semi-finals nke egwuregwu EFL Championship mgbe ha nwụsịrị.
Mgbe Bamford sonyeere Leeds na 2018, ọtụtụ amachaghị na ọdịnihu klọb ahụ dabere n'ubu ya.
Egwuregwu mgbe egwuregwu gasịrị, ọ ka dị mma n'ụdị site na mmụba utịp na ihe mgbaru ọsọ. O mechara nye aka ibu ibu na-ehi ụra laghachi Premier League na njedebe nke oge 2019/2020.
N'oge a na-etinye Patrick Bamford Biography, ọ ka bụ otu n'ime akụ bara uru nke Leeds.
Obi abụọ adịghị ya, ọ na-atụ anya inweta ihe ndị ọzọ na ụlọ ọrụ n'okpuru Marcelo Bielsa. Kedu ụzọ ọ bụla tụgharịrị maka ya, ndị ọzọ, dịka anyị na-ekwu mgbe niile, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Patrick Bamford Girlfriend?
Na 27 afọ (atụmatụ 2020), a na-atụ anya na onye ọlụlụ ga-alụ di ma ọ bụ nwee enyi nwanyị. Bamford na-akọrọ igbe nke atụmanya ikpeazụ ahụ.
Aha enyi nwanyị Patrick Bamford bụ Michaela Ireland. N'ebe a, nwa nwoke hụrụ n'anya nwere akara ya na ma eleghị anya, mgbanaka ahụ.
Anyị amachaghị banyere mgbe duo zutere ma bido ịkpa. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ike iji obi ike kọọ na enyi nwanyị ya na nwunye ya (Michaela) bụ otu n'ime ndị nwere mmetụta na ndụ ya.
Obi abụọ adịghị ya na ha nwere ezi mmetụta maka ibe ha na nnukwu atụmatụ maka ọdịnihu.
Ndụ Patrick Bamford Ezinụlọ:
Onwere ndi mmadu ndi n’enweghi ike ikwuputa mgbe obula o na akuko ihe omuma ya. Ọ bụghị ndị ọzọ karịa ezinụlọ ya.
N'ebe a, anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara nne na nna na ụmụnne Patrick Bamford. Na mgbakwunye, a ga-akọwapụta eziokwu banyere agbụrụ ezinụlọ ya ebe a.
Banyere Patrick Bamford Nne:
Mama ahụ na-aga n'ihu si Ireland ma nwee ezinụlọ Irish. Bamford hụrụ nne ya n'anya ma na-ekele ya maka ịmanye ya ka ọ gụọ nwa oge oge ọ bụla ọ gara nọrọ na klọb ọ bụla dị mma na ogologo oge.
Site na nne ya, Bamford ruru eru ịnọchite anya Ireland na mmemme mba ụwa n'okpuru iwu nne na nna ochie.
Banyere Patrick Bamford Nna:
Russell Bamford bụ papa nye onye na-eti ihe. Ọ na-ewu ewu na ndị na-ede egwuregwu ole na ole na ndị ọ na-aza ajụjụ ọnụ banyere mmepe na ọrụ ọkachamara nwa ya nwoke.
Ikpe ikpe site na foto dị n'okpuru, ị ga-amata na Russell hụrụ ezinụlọ ọ bụla n'anya.
Banyere Bammụnne Patrick Bamford:
Onye agha ahụ nwere ụmụnne nwanyị abụọ ndị ọ bụghị naanị na ha mara mma mana ha nwekwara ọgụgụ isi. Aha ụmụnne nwanyị Bamford bụ Orla na Ciara. Onye ọ bụla nke lebara mmadụ atọ ahụ anya nwere ike ikwenye na ha dị atọ.
Sistersmụnna nwanyị abụọ ahụ ga-akpachi anya na naanị nwanne ha nwoke nke mere ka aha ezinụlọ pụta. Lee onye na-eti ihe na ụmụnne ya nwanyị - onye gụsịrị akwụkwọ Orla (n'etiti) na Ciara (n'aka nri).
Banyere ndị ezinụlọ Patrick Bamford:
N'ịga n'ihu na ndụ ezinụlọ nke onye egwu ahụ, enwere ihe nzuzo banyere nna nna ya. Ya mere, enweghi ezi ihe omuma banyere nne na nna ya na nne na nna ya.
We maara na otu akụkụ bụ Bekee na nke ọzọ, Irish. Ọzọkwa, a chọpụtaghị nwanne nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Banyere nwanne nna ya:
Patrick Bamford metụtara JCB? azịza ya bụ EE! Ka anyị wee ghara ichefu, otu n'ime ndị ikwu Bamford dị anya bụ onye nchoputa JCB bụ Anthony Bamford onye ruru nde dọla 4.6. O doro anya na Striker nwere ndị ezinụlọ bara ọgaranya na ebe dị elu.
Patrick Bamford Ndụ Nke Onwe:
Ka anyị kwuo maka ndụ Pat na mpụga bọọlụ, ọkachasị dịka ọ gbasara ọdịnaya agwa ya. Maka ndị na-ebido, ọtụtụ na-ele ya anya dị ka onye nwere ọgụgụ isi na onye egwuregwu na-adịghị ahụkebe.
N'agbanyeghị na o si n'ezinụlọ bara ọgaranya, ọ nọ ala n'ụwa na mmekọrịta ya na ndị egwuregwu na ndị agbụrụ ibe ya. Ọ bụrụ na ọbụghị maka bọọlụ, Biography nke Patrick Bamford ga-ejupụta na okooko osisi nke ọrụ egwu ya.
Mgbe ọ bụla Bamford anọghị na pitch ma ọ bụ ọzụzụ, ịnwere ike ijide ya ka ọ kpọọ violin, piano, guitar ma ọ bụ saxophone. Ọ bụ na ọ bụghị ezigbo mmadụ?
Na nke dị n'elu, e jidere ya na-eme na Rockliffe Park Training Complex. Ọzọkwa, ọ nwere ezigbo iwu nke German, French na Spanish.
Tụkwasị na ndepụta nke ihe omume ntụrụndụ ya bụ ezumike, ikiri ihe nkiri, ma soro ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrịa. Nke a bụ otu n'ime ụzọ jupụtara na-atọ ụtọ nke ọ na-enwe ezumike ya.
Patrick Bamford si ebi ndụ:
Banyere otu CF si eme ma na-emefu ego ya, o nwere atụmatụ ruru 15 Million Euros (atụmatụ 2020).
Ọ bụghị akụkọ na ụgwọ na ụgwọ bụ isi ihe si enweta ego ya. N'ezie, ọ nọ n'etiti ndị Leeds kacha akwụ ụgwọ kacha akwụ ụgwọ ụgwọ kwa afọ nke £ 1,820,000.
Patrick Bamford arsgbọ ala:
Kwanye nnukwu ego a pụtara na ọ ga-esiri Bamford ike ịgọnahụ onwe ya ụfọdụ ihe okomoko nke ndụ.
Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọ na-anya ụgbọ ala dị iche iche ma nwee ụgbọala ndị ọzọ mara mma na-ajụ oyi na ụgbọala nke ebe obibi London.
Iji mechie mpempe a na-adọrọ mmasị na akụkọ ndụ Patrick Bamford, nke a bụ obere ihe ama ama ma ọ bụ eziokwu banyere ya.
Eziokwu # 1 - Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ego ọ bụla
Kwa Afọ £ 1,820,000.
kwa ọnwa £ 151,667
Kwa Izu £ 34,946
Kwa .bọchị £ 4,992
Kwa Nkeji £ 3.47
N'oge ị malitere ilele Patrick Bamford's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2 - A CoD Fan na Obi:
A na - akọ na Bamford bụ nnukwu onye ọkpụkpọ oku ọkpụkpọ vidiyo vidiyo. ya mere egwuregwu vidio riri ahụ. A hụrụ ya ebe a ka ọ na-eme ngalaba tupu ọ gaa asọmpi CoD na-asọ asọ.
Eziokwu # 3 - Okpukpe Patrick Bamford:
Bamford ka na-enye njiri mara ma ọ bụ onye na-ekweghị ekwe ma ọ bụ na uzọ ọzọ. Ma nsogbu ndị ahụ na-amasị ya ịbụ onye kwere ekwe nke na-eme Kraịst. Cheta, Patrick bụ aha ndị Kraịst.
Eziokwu # 4 - FIFA Ikpe na-ezighị ezi:
Bamford nwere FIFA FIFA dara ogbenye maka akara 2020 nwere ikike nke 72. Ntụle ahụ anaghị agbakwunye maka onye na-eti ọkpọ nke nyeere Leeds aka inweta nkwalite yana nọ n'elu egwuregwu ya. Gịnị ka i chere banyere ikpe na-ezighị ezi a? Ka anyị mara na igbe igbe.
Eziokwu # 5 - Mmụta:
Bamford bụ onye gụrụ ezigbo akwụkwọ. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ GCSE na ọkwa dị larịị, ọ nwetara ohere agụmakwụkwọ iji gụọ azụmaahịa na Mahadum Harvard.
Egwuregwu football nke mgbe ahụ chụrụ àjà ahụ n'elu ebe ịchụàjà na-arụ ọrụ ya na England.
Eziokwu # 6 - Nhọrọ nke Pet:
Abia na idebe anu ulo, Bamford ga ahoro nkita kari ozo ndi ozo. Aha nkịta ya bụ Duke. Onye na-enye Nkịta Duke aha? Bamford na-eme. Hụ otu ụzọ o si jiri ịhụnanya jide nkịta ya, bụ Duke.
Eziokwu # 7 - Banyere Ebe omumu ya:
You maara?… Ebe ezinụlọ Partick Bamford si, Grantham, ka amụrụ dịka ebe amụrụ onye bụbu Mịnịsta Ala UK Margaret Thatcher.
Iji nweta nkọwapụta ngwa ngwa banyere Patrick Bamford's Bio, nke a bụ tebụl maka gị.
aha otutu Pat
Ụbọchị ọmụmụ Daybọchị 5th nke Septemba 1993
Ebe amụrụ onye Grantham na England
Ndị nne na nna Russell Bamford (nna)
Nwanne Ciara na Orla (ụmụnne nwanyị)
enyi nwanyị Michaela Ireland
omume ntụrụndụ Ezumike, ikiri ihe nkiri, na isoro ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrịa.
Ngwakọta Net Nde Euro 15
ụgwọ £ 1,820,000
elu 6 ụkwụ, 1 sentimita asatọ
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na Patrick Bamford Biography. Anyị nwere olile anya na ọ nyere gị mmụọ nsọ na mmụọ na-anọgidesi ike na-emeri ihe niile.
Ọ dabara nke ọma, Bamford dị ka Kalvin Phillips enwekwaghị okwukwe na ike ya n'agbanyeghị enweghị ike ịchọta ụkwụ ya na oge 6 nke mgbazinye ego ya.
Ọzọkwa, ọ dị anyị mkpa ịkwanye nne na nna onye na-eti ihe egwu maka ịgba ya ume ka ọ gaa n'ihu, ọbụlagodi mgbe ha nwere ike ịgwa ya ka ọ nwaa ihe ọzọ. N'ịchekwa nne ya na nna ya, mmetụta ezinụlọ Patrick Bamford na uto ya tokwara otuto.
Na lifebogger, anyị na-anya isi na akwụkwọ anyị na-agbanwe agbanwe nke Akụkọ nwata na akụkọ eziokwu ndị ziri ezi na nke ziri ezi.
You hụrụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya n'isiokwu a? Mee ka anyi mara na ngalaba a. N'agbanyeghị nke ahụ, gwa anyị ihe ị chere banyere Patrick.